Waggaa haaraafii gabaa ayyaanaa – ዜና ከምንጩ
Barriibaraan bakka buufamee baatiileefi guyyaan wal bakka buusaa waggaa haaraa senneerra.akkalakkofsa Itiyoophiyaatti jijjirraan baraa Fulbaana tokko kabajama.Fulbaanni tokko kuunmoggaasa amantawaa mataasaa danda’e kan qabu yammu ta’u akkaataama kanaan jabanaMaatiiwosJabana Maarqos jabanaLuuqaasifiijabanaYoohaannisjadhamuudhaanibsamu.Lamiileen Itiyoophiyaa ayyaanni yammu dhufuwantootaayyaanaaf isaan barbaachisu bituudhaafsardamuu.Gabaanisaasmiira ayyaanaa qabaata.
Ayyaana hoo’iisuu jadhamanii wantootii bitaman keessaasangaa, hoolaa,re’ee Lukkuun, (haanqaaquu) buphaafiidhadhaanieeramu.AddisMaaladaan gabaa Shoolaattiargamteeakkaataailaalteen gabaan heedduho’aa ture .Wantootagararraateeraman kana namni bitudhufeheddu jiraachuu baatulle meeshaalee manaadursabitamu qaban bituu warren dhufaniin gabaan hoo’a ture .
Abbabach DastaaZayiita,Buna,akkasumas wantootii nyaataafi taa’an garaa garaabituudhaaf kan dhufan nama umurii waggaa 30ffaa keessa jiraniidha.AddisMaaladaaniis qaala’iinsa jireenya gabaa keessatti mul’atuu dabalaa wayita dhufetti ayyaanni yammu itti dabalamu miiraakkamii uumuu akka danda’u yaada isaanii gaafattetti.
Qaala’iinsiijireenyaafii ayyaanni walirraa buu’unisaa jireenya heeddu nutti hammessera jedhan Abbabach.Ameentaanmahaalaqaamanaa qabatanii dhufan waan bitu yaadan bitu waan isaan hindanddesiisneefxiqqessaniibituufii kaan immodhiisuudhaan isa danda’anbitachuu isaanii dubbataniiru.
Zayiita birrii 650,Buna birrii 250,Daakuu birrii 60,Dhadhaa birrii 450 kiiloodhaanbiteemahaalaqa isa naaf hafeenwantoota nyaataafi ta’an kanneen biroo biteera jadhaniiru
Daldaltoonniiyeroohedduu ayyaanni yammu ga’u gatii itti dabaluukan jedhan Abbabach amma ammoayyaanniittu hin ga’iin jireenyii qaala’eera.Kanaafiis maal gochuu akka qabnu wal ’alaa jirra. Maallaqa ishee of harkaa qabnnunimmo ayyaana ayyaaneefachuu yaannerra jedhaniiru.
Itiyoophiyaatti yeroo dhiyoodhaa asitti dabalaa kan dhufee gatiin shaqaxootaa qaala’iinni jireenya akka dabaluusababii ta’a jira.
Suuniis ta’ee garuu wal simuudhabuundhiyeessifi fedhii heddumachuun lakkofsaummataa ,dabaluungatii meeshaalee ijaarsaa cimaa deemuu qaala’iinsa jireenyaaf guumaacha mataa isaa taasisuu kaasu hayyoonni.
Zayitiin Miidhaan nyaataasamsamaakan akka Paastaafaa jiran gatiin isaanii ergii dabaluu jalqabee baatileenlakaa’amaniiru.Gatiidaabboodabaleeolba’a kan jiruu gatiin shaqaxootaa nyaata hawaasa bitee nyaatu garaa hammeesseera .Rakkinichafuruudhaafyaaliiwwan garaa garaataasiifamaniiru yoo jadhameesammalleerakinichiihiddaisaa gad fageefateemul’ata.
Ministerridaldalaafiiinduustriis ta’ee biiroondaldalaa Finfinnee warren daldala keessatti daba hojjataniifi homishadhoksanadabaa jirra yoo jadhaniisbu’aanisaaammayyuhinmul’anne .yeroo yeroottis hundi kan gama isaahaaba’atuukan jadhuu qondaaltoota mootummaa biraa yoo dhaga’amees warren bitatan bira wantiiga’ee hinjiru.
Qaala’iinsa gatii tasgabbeesuudhaaf koreehunddefameekessa kan jiruu abbaan taayiitaa shamattotaa federaalaa ayyanasababeefachuudhaan hojii hojjechaa akka jiru Addis Maaladaatti himeera.
Biiroon daldalaa Finfinnee gamaisaatiinbittaafiigurgurtaa ayyaanaa ilaalchisee daballii gatii hinmalleetaasiifamantoa’achuudhaafqophiitaasiisaajiraachuusaa madden dhaabatiicha keessatti argamaneeraniiru.
LamiileeItiyoophiyaafhiikkon ayyaanni waggaa qabuu guddaadha.Guyyichiimaatiif firri walitti qabameenyaachaafii dhugaa aadaasaafii walitti dhufeenyaisaakanittcimsatuudha.Aadaa walgargaaruu jiruun inni qabuu isa hinqabnneefkan itti qooduufi ayyaana waliin kan itti kabajatumalatto ittiin ibsamuu mataa isaa qaba.
Ayyaanni yammu dhufuu guyyaa biraakan hin nyaannenyaatawwan kan akka lukkuufiianqaaquunguyyicha kan miidhagsaniidha.Maarreeyero amma gatii anqaaquufiilukkuu jiruun nama ammamiituubitee ittiin ayyaaneefata inni jadhuu gaaffii nama hundaati.
Gabaa Shoolaattis gurguramaa kan ture Lukkuun tokko birrii 300 amma 800dha.Buuphaan iddoodhaa iddootti birrii 7 amma 10tti gurguramaa akka turee Addis Maaladaantaajjabddetii.
Kessumaa yeroo dhiyoodhaa as gatiin buphaa ariitiidhaandabaluunisaakan isaan naasiseedaldalttonni buphaa dhimichaakkanattiibsu.
DabbabaMakonnannamalukkuuqa’ee isaanii keessatti horsiisan fayyadamuudhaan buphaa rabsan nama umurii waggaa 40ffaa kessa jiranyamuu ta’annyaanni lukkuwwanii miidhaan ta’uun isaan nibeekama.akaakkuwwanmidhaanii kan akka qamadiifiiboqqollo jiran gatiin isaanii kan duraa irraa dachaadhaandabaleerajadhu.Dabaluun gatii nyaata lukkuwwaniiimmo dabaluu gatii buphaaf akka sababiittika’a kan jedhan Dabbaban guyyaatti buphaa 100 amma 300 suuqiiwwandaldalaaf akka dhiyeesaneeraniiru.
Buphaa tokko qarshii 7n akka raabsankan himan Dabbaban kunis maamiltootaa dhabuumannaajadhaniidaballii gatii xinnotaasiisan ta’u ibsu.Gatii kanaaoliingurgurra yoo jannenamanurraabituuhiin argamnu jadhu.
Ayyaanni yammu dhufuimmofedhiin guddaa waan jiruuf ayyaanaafba’yiinaanrabsuuf hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniiru.
Haala bittaafigurgurtaa gabaa Shoolaattiaggarreedhadhaafiibunniidaballii gatii guddaa kan qabanidha.Kesumaa bunni birrii 150 ture yeroo ammaa birrii 250 amma 300tti gurguramaa jira.
Warren ayyana waggaa ho’iisankessa dhadhaan isa tokkodha.Ayyana faasikaa darbeen wal bira qabamee yammu ilaalamuu dhadhaan xinno gatii hiriiseera.
Abarraash Zallaqawaggotii 7f gurgurtaadhadhaa irratti boba’aniijiru.gatiindhadhaaayyana faasikaa darbee birrii 600 kan gurguramaa turee ta’uu himanii amma gatiin isaaxinnohirii’see birrii 480 amma 530tti kiiloodhaan akka gurguramuu nutti himaniiru.
Abarraash dhadhaan isaanii magaalota Naannoo Amaaraairraa kandhufuu ta’uu isaaniitiin warreen isaanii dhiyeessansababii geejjibaa tursiisanii akka fidaniifdubbatu.Abarraash dhiyeesitonni dhadhaa gabaa malee bakkawwangaraa garaafii darbee darbeeskannen gara dhaabbilee gessani gurguran birrii 300 amma 350tti akka gurguran nuhubachiisaniiru.
Kuunimmowarreen gurguran biratti dhadhaan kuufamee akka turu taasiisa jadhaniiru.Tariisdhiibbaan sanaa gatii isaa akka hir’atuu taasiseera jadhaniiru.
Gabaa Shoolaattihoolonni bakka garaa garaattibitamanii dhufan amma birrii kuma jahaatti gurguramaa jiru. Gabaa kanatti gatiin hoolaa xiqqaa birrii kuma sadii yammu ta’u inni guddaa jadhamuuimmo amma birri kuma 9fii dhibba shaniitti gurguramaa jira
Jiraattu magaalaa Finfinnee kanta’anhaati warra maatii afuriiMuluu Dassaalanyi yeroo hundaa dabalu gatii akka barandubbatu. Ayyaanni yammu ga’uu ammo caalaatti akka dabaluu hubachuudhaanwantoota tokko tokkodursanii bituuf karoorsanii ture.
Muluun galiin isaanii baatii birrii 2300 yamuu ta’u erga abbaan warra isaanii du’aniisoorama isaanii birrii 1350 akka dabalataatti fayadamu.
Muluun ijoollee sadiifi obbolettii isaanii qaamaa miidhamtuu taatte hojii qulqullinaahojjataniikanjiraachisan yammu ta’u qaala’iinsiijireenyaa itti dabalaa deemeera jedhu.
Homishoota hundaa keessaa kanheddunanaasise dabaluu gatii zayiitiitii kan jedhan Muluun zayiitii birrii 650n nan bita jedhee yaadee hin beekujadhu.
Dhugaadha amma yeroo dhiyootti amma birrii 550tti bite fayadameera. Amma garuuyeroo tokkotti birrii 100dabaleyammunarguu hedduun na’ee jedhu.
Zayiitiin nyaata hundaa keessatti kan naqamuudha .Zayiitii malee wantiihojjatamuu hinjiru.kanaafiittun hin jaal’attiin bite. Kessumaa ayyaanni yammu dhufunyaatniiakkaakuu gara garaa ijaahojjatamuinniiszayiitaafdhadhaadhaan hojjetamaa jachuudhaan ibsu.
Qaala’iinsa jireenyaa kana akka tasgabbessuf abbaan taayitaa shamattotaa daldalaafinduustirii akkasumas qaamooleen dhimmi isaan ilaalattukoreenwaliiniicaaseessan gabaa kana tasgabbessufnihojjeta jedhameera.
Fedhii hawaasaa zayiitii nyaataafi jiru fiihomshnniihomishamuu wal simuudhabuuministeeradaldalaafinduustriittidarektarato’annaafiihorddofii meeshaalee daldalaaKaasaahuunMuulaat himaniiru.
Raawwii yeroo darbee kankaasanKaasaahuundhiyeessiin harka dhibba kessaa shantama guutu jiraachuu ibsaniiru.
Sharafnnii alaa ga’a ta’e jiraachuu dhabuun ammeentaa dhiyeessii hiri’isuusaakankaasanKaasaahuunkooviid 19 ergiimudatee booda akkaataan hojii fraankovaaluutaahauuisaatiin gatiin zayiitaaolka’uuisaa kaasaniiru.
Akkaataa hojii kanaan baatii Waxabajjii xuummuraa irraa amma Muddee 2013tti zayiitiinliitiramiliyoona 16 qaraxarraa bilisa galee ture.
Yaroo kanatti inni bitatuu hundi amma birrii 300n bitata ture.Daldaltoonniifiraankovaaluutaa fayyadaman sharafa alaa doolaara gabaa seeraan alaa keessa jiru akka malee qiisaassessuu isaaniitiin akkaataan hojii kuun akka hafuutaasiifameera. Yeroo kanatti ameentaanzayiitaa alaa galuhi’rachuuisaatiinyeroodhaa yerootti hiri’isaa deeme amma birrii 650 amma 700 tti gurguramaa jira.
Feedhiizayiitaaayyana irra jiru sababiitaasifachudhaan zayiita,qamadiifii shuukkaara mootummaan doolaara olka’eejiruu fayyadamuudhaan bituuf karoorseera.
Homshittonni humna homishuu isaanii akka dabalan taasiifamaa jiraachuu Kaasaahuunhimaniiru.Ayyaanni waggaa yamuu yaadamu namootnnii nyaachuufii dhuguungamattimana bareeduukessa jiraachuu yaaduu isaaniitiin .mana nibareechuu kanneen jedhaman kan akka soofaahafaalafa Televiizhiniifii kanneen biroo nibitamu.
Keessumaa waggaa haaraatti mana keessatti meeshaa haaraa bituun waggaa dhufuttiabdii haaraa fidee dhufa jadhaniiwarreen yaadan hedduwwaniidha.
Kanneen kessaa bakka bittaafiigurgurtaasoofaatiikanagarreenTasfaayeeAbarraadha. Isaaniis gabaa tooramarsariitii yookan on layiiniidhaa amma mannetiimukaattiilaalanii mana mukaaKotoobeetti argamu Soofaa birrii kuma 40 baasuubituu isaanii ibsu.
Waggaa haaraattimeeshaa haaraa bituunnagamachiisa. Amma maatii hunddefadhee waggaa haaraayammun kabajuu isa jalqabaa yoo ta’ees amma hara’attii waggaa haaraatti waan tokko ittun hin bitiin hin darbu jachuudhaan yaadannoisaanii nuuqoodaniiru.
Waggaa kanatti immo maatii isaanii gamachiisuufmeeshaamanaaguutuudhaafkaroora qabatanii ture.Garu haalli gabaa amma yaadan bituu akka isaan hin danddeesifnne dubbata.
Televiizhinii bituudhaafbirri kuma 15 amma kuma 80tti gaafatamuuisaa nutti himeera.Gatiin bittaa Televiizhinii akaakuufiiammeentaa garaa garaatiin inni gaafatameeshumnnaaol akka itti ta’ee ibseera.
Zayiitiin ,Lukkuu .buphaafiifoonakaakuwwan nyaata yeroo hundaa ayyaanaaffayadamnnudha kan jedhan Tasfaayeenmeeshaamanaabiteegutuukannandhisee ayyaanni waggaa dhufuu isaatiini jadhu.
Yeroo hedduayyaanaafhiri’fnni gatii jira yoo jadhameesanaaf garuu hiri’suunisaanatti hin mul’annee kanaaf ayyaanaa booda bituudhaafkaroorseera jedhaniiru.
Total views : 6693540